Series Promo Archives - YTV
Home » Series Promo
နယ်မြေလုစစ်ပွဲတွေကြားမှာ အင်အားအကြီးမားဆုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဟန်နိုင်ငံတော်က တိုင်းပြည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ နယ်မြေလုစစ်ပွဲတွေကြားအင်အားကြီးမားလာတဲ့ ဟန်နိုင်ငံတော်ကဧကရာဇ်ကို ဆရာ့ဖြစ်သူအတွက် သွေးကြွေးဆပ်မယ့်ဓားသူရဲကောင်းလေး “ထန်းနန်” … တန်ခိုးသြဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ ဟန်ဧကရာဇ်တို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုက ဓားလောကရဲ့ အဆုံးအဖြတ်တစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ . . . […]
မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်း ကျောထောက်နောက်ခံ အသိုင်းအဝိုင်းတွေမရှိရင်တောင် ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဇွဲ၊ ဝီရိယတွေပေါင်းစပ်ပြီး ကြိုးစားမယ်ဆို မျှော်လင့်ချက်အိပ်မက်တွေက တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တဲ့ လူငယ်တိုင်းအတွက် YTV Channel ရဲ့ နှလုံးသားကစားပွဲ ဇာတ်လမ်းတွဲ… ဇာတ်လမ်းလေးက […]
လူသားမျိုးနွယ်တွေ တကယ်ပဲ ကွယ်ပျောက်ကုန်တော့မှာလား ကမ္ဘာကြီးပျက်စီးပြီးတဲ့နောက် လူသားမျိုးနွယ် တစ်ခုလုံး အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ အတွက် လူငယ်အယောက် (၁၀၀) ကို ကမ္ဘာ ဟောင်းဆီ စေလွှတ်ခဲ့ ပြီး နေထိုင်ဖို့ သင့်/မသင့် ကို ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်… Seson […]
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ ဆိုးသွမ်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်ရံတော်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းမှာ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အခါ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ဟာသလေးတွေနဲ့ ကြည့်ရှုကြရမှာပါ. ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကြီးတို့ အနေနဲ့ကလည်း YTV Channel ကနေ ပြသပေးနေတဲ့ “သတ္တိခဲမလေး” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို […]
July 25, 2020 10:52 am
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကိုမှ အကြိုက်တွေ့လှပါတယ်ဆိုတဲ့ YTV Channel ရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် “တော်ဝင်ကလဲ့စား” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို YTV Channel ကနေ ပြသပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် မင်းသားလေး “Ma Tianyu”အနေနဲ့လည်း “တော်ဝင်ကလဲ့စား” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်လို့ […]
ကာတွန်း Animation Series တွေကိုမှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက် အခုတခါမှာတော့ “ The Lion Guard ” ဆိုတဲ့ အမေရိကန် ကာတွန်းဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို ပြသပေးတော့မယ်ဆိုရင်ရော ကြည့်ကြမှာလား… ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ မင်းသားလေး Kion […]